Fandrafetana ny volavolana lalàm-pifidianana : misy ihany ny tsy fitovian-kevitra | NewsMada
Fandrafetana ny volavolana lalàm-pifidianana : misy ihany ny tsy fitovian-kevitra
“Hita fa miroso ny adihevitra amin’izao. Amin’izany, misy ihany ny tsy fitovian-kevitra. Nefa efa napetraka tany amin’ny voalohany fa tsy izay mahametimety ny fitondrana na mahametimety ny mpanohitra no ilaina, fa izay entina hanasoavana ny firenena.”
Izay ny fanazavan’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, teny Mahazoarivo, omaly, momba fihaonan’ny komity iraisan’ny minisitera tamin’ireo mpikamban’ny vaomiera fakan-kevitra avy amin’ny firaisamonina sivily hanatsarana ny lalàm-pifidianana. Mizotra araka ny tokony ho izy ny adihevitra.
Efa miditra amin’ny isan’andininy amin’ny volavolan-dalàna ny komity iraisan’ny minisitera sy ny vaomiera fakan-kevitra. Raha mitohy izao, hilamina tanteraka ny fizotran’ny adihevitra. Tsy ho ela fa efa faramparanana amin’izay ny fakan-kevitra amin’ireo mpisehatra amin’ny fikirakirana ny lalàna momba ny fifidianana, fa izay no tena tanjona.
Ato ho ato ny fivoriana tsy ara-potoan’ny parlemanta
“Efa mieritreritra ny fanolorana ny volavolan-dalàna any amin’ny Antenimiera roa tonta amin’ny alalan’ny fivoriana tsy ara-potoana amin’izay”, hoy izy. Vita ny ambangovangony amin’ireo rijan-teny ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana. Tsy miala amin’ny foto-kevi-dehibe niaingana teo aloha amin’ny hoe: fampahafantarana amin’ny firaisamonina sivily ny momba ny lalàm-pifidianana, izay niainga tany amin-dry zareo ihany satria mpikamban’ny vaomiera fakan-kevitra izy ireo.
Ny vokatry ny asa no hitsarana ny adihevitra
Na ahoana na ahoana, ady fiady ny an’ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily amin’ny firotsahana an-tsehatra sy fanaraha-maso akaiky ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana. Raharahan’ny olom-pirenena rehetra ny fifidianana. Tsy an’ny mpitondra fanjakana irery io, ka izay matimety azy ihany no atao.
Ahoana, ohatra, no tsy hiverenan’ny fampiasana sy fanamparana fahafem-panjakana amin’ny fanatanterahana fifidianana? Toy ny nafitsoky ny mpitondra tamin’ny fifidianana kaominaly sy fifidianana senatorialy, taona 2015. Takina koa ny fitsarana sy famaizana izay mandika lalàna amin’izany. Hanao ahoana? Ny vokatry ny asa no hitsara…